काठमाडौंमा एक तले घर बनाउँदा कति खर्च लाग्छ ? « Clickmandu
काठमाडौं । राजधानी काठमाडौं भौगोलिक हिसाबले मात्रै होइन अनेकन सम्भावनाले भरिएको केन्द्रीय सहर हो । वरिपरी पहाडले पहरा दिइरहेको उपत्यकामा कुनै समय विशाल पोखरी थियो जुन कालान्तरमा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो सहर बन्यो ।
मुलुकभरका मानिसका लागि काठमाडौं अत्यावश्यक सहर हो । विभिन्न जिल्लाबाट अध्ययनका लागि, विदेश जानेहरु हवाई जहाज चढ्नका लागि मात्रै होइन मानिसहरु सुरक्षित करिअरको खोजीमा हरेक दिन उपत्याकामा पाइला राख्छन् ।
उनीहरु यही करिअर शुरु गर्छन र कालान्तरमा उपत्यकामा स्थायी बसोबास गर्छन । यसरी हालसम्म काठमाडौं उपत्यकामा जनसंख्या ७० लाखको हाराहारीमा पुगेको छ । यतिधेरै जनसंख्या बस्ने उपत्यकाको कुना–कुनासम्म आवासीय बसोबास फैलिएको छ ।
उपत्यकामा स्थायी बसोबास गर्नेको रहर हुन्छ कम्तीमा एउटा बस्नका लागि राम्रो र चिटिक्क परेको घर होस् । र, मानिसहरु त्यही घर बनाउनका लागि लाग्ने खर्च जुटाउन अनेकन पर्यन्त गर्छन् ।
घर बनाउनुअघि सबैभन्दा यसका लागि लाग्ने खर्चको अनुमानित बजेट बिनियोजन गर्नु आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि आफूसँग कति बजेट छ ? अन्य स्रोत कसरी जुटाउन सकिन्छ भन्ने आधारमा निर्णय लिनुपर्छ । त्यसका लागि तपाईंले प्राविधिकको सल्लाह लिनु लाभदायक हुन्छ ।
साथै, घर बनाउँदा के–के सामानका लागि कति खर्च हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । उपत्यकामा घर बनाउन धेरै लागत लाग्ने धेरैको सोच हुन सक्छ । तर साच्चिकै कति खर्च लाग्छ त ?
साधारणतया ३ आनादेखि माथिको क्षेत्रफलमा राम्रो घर बनाउन सकिन्छ । एकतले घरमा सामान्यतयाः १ हजार स्क्वायर फिट आसपासको क्षेत्रफल हुन्छ । १ हजार स्क्वायर फिट क्षेत्रफलमा चार कोठासहितको स्ट्यान्डर्ड घर बनाउन सकिने ‘मेरो घर’ कम्पनीका संस्थापक तथा इन्जिनियर विपिन गैरेको भनाइ छ ।
३ आनामा एक तला घर बनाउँदा खर्च कति ?
सामान्यतया उपत्यकामा एक तला मात्रै बनाउने घरहरु कम नै हुन्छन् । तर, यदि कुनै व्यक्तिले घर बनाउँदा एक तला मात्रै बनाउने पछि नथप्ने मानसिकताका साथ घर बनाउने हो भने खर्च कम हुने इन्जिनियर गैरेको भनाइ छ ।
उनका अनुसार उपत्यकाका घर बनाउँदा एक तला अगाडि बनाउने पछि थप्ने हिसाबले धेरै घर बनाउँछन् जसले गर्दा एक तला घर बनाउने खर्चमा फरक आउँछ ।
सामान्यतयाः घर बनाउँदा एक तला अगाडि बनाउने र बाँकी तलापछि थप्ने विषयले खर्चमा फरक पार्छ ।
‘शुरुमा एक तला बनाउने र पछि अर्को तला थप्ने गरी घर बनाउने सोच छ भने फाउन्डेसनमा धेरै खर्च गर्नुपर्छ । ताकी अर्को तला थप्दा समस्या नआओस्,’ उनले भने ।
तर एक तला मात्रै बनाउने हो भने सोही अनुसारको खर्च बिनियोजन गरे पुग्ने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार एक तला मात्रै बनाउने हो भने १५ लाख रुपैयाँदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म घर बन्छ । र, यी बीचमा किन यति धेरै फरक प¥यो भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । यसमा आफूले कस्तो सामान प्रयोग गर्ने हो त्यसमा भर पर्ने उनले बताए ।
‘घर कसरी बनाउने, कुन प्राविधिक प्रयोग गर्ने, इँट्टाको प्रयोग, आरसीसी ढलान गर्ने हो अथवा स्टिलको बनाउने हो, वा बजारमा उपलब्ध नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने हो त्यसका आधारमा खर्च तलमाथि हुन्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार ३० लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने एक तलाको राम्रो घर बनाउन सकिन्छ । यसका लागि एक तला मात्रै घर बनाउँदा १५ देखि २० प्रतिशत ज्यालामा खर्च हुन्छ । त्यसैगरी फिनिसिङमा १५ देखि २० प्रतिशत, इँट्टा, गारो, डण्डी, ढलानलगायतमा १० देखि १५ प्रतिशत, प्लास्टरमा ६ देखि ७ प्रतिशत र ढोका, चौकसमा ३ देखि ४ प्रतिशत खर्च हुन्छ ।
एक तला अर्को तला थप्दा कति खर्च बढ्छ ?
धेरै मानिसहरु एकतला घर बनाइसकेपछि माथि थप्दा धेरै खर्च लाग्दैन भन्ने सोच राख्छन् । यदि तपाईं एक तला घर बनाएर पछि अर्को तला थप्ने सोच सहित घर बनाउँदै हुनुहुन्छ जग बनाउँदा धेरै खर्च लाग्छ ।
त्यसका लागि लगभग ९५ प्रतिशत आरसीसीकै अनुसार बनाउनुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकामा घर बनाउनका लागि प्रयोग हुने सिमेन्ट, रड, कामदारको लागतसहित दुई तलाको घर बनाउँदा लगभग ८० लाखदेखि एक करोड २० लाखसम्म पर्न जान्छ ।
घर बनाउँदा सबैभन्दा बढी खर्च हुने ज्यालामा हो । यदि तपाईं दुई तलाको वा साढे दुई तलाको घर एक करोड रुपैयाँमा बनाउँदै हुनुहुन्छ भने ज्यालामा मात्रै १५ लाखदेखि २० लाख खर्च हुन्छ ।
घर बनाउँदा स्क्वायर फिट अनुसार नापेर ज्याला लिने चलन छ । त्यसबाहेक बत्ती, स्यानिटरी, टायल मार्बल फिटिङको र रङ लगाउँदाको ज्याला पनि हुन्छ । साथै, रेलिङको काममा झ्यालको स्क्वायर फिट अनुसार खर्च लाग्छ ।
त्यस्तै सबैभन्दा बढी खर्च हुनेमा इँट्टा, डण्डी र ढलानमा पनि हो । घर बनाउँदा गारो, डण्डी र ढलानको कामको लागि लगभग बराबर खर्च हुन्छ ।
त्यसमा एउटा घर बनाउँदा १० देखि १५ टनसम्म डण्डी आवश्यक पर्दछ । साथै प्लास्टरमा भने ६ देखि ७ लाख खर्च लाग्दछ । त्यसपछि ढोका, चौकस र पल्लासमा ३ देखि ५ लाखको हाराहारीमा खर्च हुने इन्जिनियर गरैले बताए ।
पछिल्लो समय घर बनाउनेभन्दा पनि घर कसरी सजाउने भन्ने विषयमा धेरै मानिसको ध्यान गएको हुनाले फिनिसिङमा धेरै खर्च हुने गरेको गैरेको अनुभव छ ।
‘घर बनाउँदा मानिसले कसरी घर सजाउने र कुन कम्पनीको सामान हाल्नेमा भर पर्छ, सोही अनुसार खर्च पनि बढ्दै जान्छ,’ उनले भने ।